Wasiirka Amniga Koofur galbeed oo amray in la dardar galiyo laamaha amaanka magalada Baydhabo. | Weheliye Online
Wasiirka Amniga Koofur galbeed oo amray in la dardar galiyo laamaha amaanka magalada Baydhabo.
Wasiirka Amniga maamulka Koofur Galbeed Somalia Mudane Xasan Xuseen Maxamed ayaa soo saaray amaro ku saabsan doorashada dhawaan lagu wado iney ka dhacdo Baydhabo KGS.
Wasiirka ayaa faray laamaha ku shaqada leh amniga in ay dardar galinta shaqada ay bulshada u hayaan iyo xaqiijinta amaanka guud ee magalada Baydhabo.
Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa lagu wadaa inay dhacdo 5-ta bishan, waxaana si aad ah isha loogu haaya doorashada, iyadoo dad badan walwal ka qabaan Musharaxiinta qaar oo hub iyo ciidamo fara badan heysta
Previous articleMaamule School oo lagu dilay degmada Afgooye ee gobolka Shabellaha Hoose .
Next articleAkhriso:Saddexda qodob ee la isku mari la yahay Guddoomiye Mursal iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre